Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitambarana intermetallika sy ny solid solution padlo | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Compoundallic Compounds sy ny solid solution padlo | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Simia / Industrial Simia / Inona no maha samy hafa Intermetallic Kamban-teny sy mafy orina vahaolana Alloys
24 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitambarana intermetallika sy ny alikaola matevina dia ny fitoviana intermetallika dia manana firafitra mitovy, fa ny padol kosa dia manana rafitra tsy mitovy.
Ny fitambaran'ny intermetallika dia singa misy ny dingana mivaingana izay misy singa metaly na semi-metaly roa na maromaro voarindra ao anaty rafitra voalamina. Ny alikaola matevina dia karazana fitaovana vita amin'ny firaka izay natao hanatsarana ny tanjaky ny metaly madio.
2. Inona avy ireo fitambarana intermetaly
3. Inona no atao hoe Solid Solution Alloys
4. Kamban-tsolika mifangaro vs Vahaolana matevina amin'ny endrika Tabular
Inona avy ireo fitambarana intermetaly?
Ny fitambaran'ny intermétallika dia singa misy dingan-javatra mivaingana ary misy singa metaly na semi-metaly roa na maromaro milamina amina firafitra voalamina. Azontsika atao ny miantso ireto fitaovana ireto ho toy ny firaka intermetallika na intermetallika. Matetika, ireo fitambarana ireo dia manana stoichiometry voafaritra tsara sy raikitra. Amin'ny ankapobeny, ny fitambarana intermetallika dia mafy sy marefo, manana toetra mekanika maripana ambony. Azontsika atao ny manasokajy ireo fitambarana ireo dia fitambarana stoichiometric sy non-stoichiometric intermetallic compound.
Rehefa mandinika ny fananana sy ny fampiharana an'ireny fitambarana ireny, amin'ny ankapobeny dia manana teboka miempo be izy ireo ary marefo amin'ny hafanan'ny efitrano. Mety misy ny fomba fitifirana na fangaro intergranular amin'ny fitambarana intermetallika noho ny rafitra voafetra tsy miankina voafetra izay ilaina amin'ny fihenan'ny plastika. Na izany aza, mety misy ny fombam-pandrefesana ductile amin'ny fitambarana intermetallika koa. Io fikojakojana io dia azo hatsaraina amin'ireo fitambarana ireo amin'ny alàlan'ny alikaola amin'ny fitaovana hafa toy ny boron, izay afaka manatsara ny firaisan'ny sisin-tany.
Ny ohatra mahazatra amin'ny fitambarana intermetallika dia misy akora magnetika toy ny alnico, sendust, ary Permendur, superconductors toa ny A 15 phase sy niobium-tin, alloys de mémoire forme, sns. Ireo fangaro intermetallika azontsika jerena amin'ny tantara dia misy varahina mavo romana, avo Sinoa varahina vita amin'ny vy sy vy metaly, SbSn.
Inona no atao hoe Solika Solika?
Ny alikaola matevina dia karazana fitaovana vita amin'ny firaka izay natao hanatsarana ny tanjaky ny metaly madio. Ny fizotry ny famokarana firavaka vahaolana mafy orina dia fantatra amin'ny fanamafisana ny vahaolana matanjaka. Ity dingana ity dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampidirana ataoma misy singa iray amin'ny firafitry ny kristaly misy singa iray hafa, izay anondroana ilay singa teo aloha ho singa mampangaroharo ary ny faharoa dia antsoina hoe metaly ifotony. Ity fanampiana ity dia mamorona vahaolana matanjaka.
Sary 01: Vahaolana matevina mifehy ny lalàm-panorenana
Amin'ny ankapobeny, ny fampidirana singa manangona dia miteraka tsy fitoviana eo an-toerana amin'ny vy madio. Izany dia mahatonga ny fahasimbana plastika ho sarotra amin'ny alàlan'ny hetsika famindra miparitaka amin'ny alàlan'ny sehatry ny fihenjanana. Etsy ankilany, ny alikaola mihoatra ny fetran'ny solubility dia mety hiteraka ny dingana faharoa izay mitarika amin'ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny mekanisma hafa, ohatra ny fananganana fitambarana intermetallika.
Sary 2: Vahaolana matevina anelanelam-potoana
Misy karazan-tsolika vahaolana mivaingana samihafa, toy ny vahaolana mivaingana solon'ny lalampanorenana sy ny vahaolana matanjaka interstitial . Ireo karazany roa ireo dia samy hafa amin'ny haben'ny singa alloying. Raha toa ka lehibe kokoa noho ny atoma solventsin'ny vahaolana ny atôma mitambatra, dia afaka manolo ny atôma misy solvent ao anaty lalitra kristaly izy io ary miteraka famolavolana vahaolana mivaingana. Raha toa ka kely kokoa noho ny ataoma solona ny atoma ao amin'ilay singa mampangaroharo dia mirona ao amin'ny tranokalan-interstitial eo anelanelan'ny atelana misy solvent izy ireo ary mamorona vahaolana mivaingana interstitial.
Fahasamihafana eo amin'ny fitambarana intermetallika sy ny alikaola matevina
Ny fitambaran-metallika sy ny famolavolana vahaolana mafy orina dia akora misy alikaola mifangaro vy sy / na tsy metaly. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitambarana intermetallika sy ny alikaola matevina dia ny fitoviana intermetallika dia manana firafitra mitovy, fa ny padol kosa dia manana rafitra tsy mitovy.
Ity tabilao manaraka ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitambaran'ny intermetallika sy ny alloys solution solid.
Famintinana - Kamban-kaonty Intermetallika vs.
1. “ 6.6.1: Vahaolana amin'ny solida ao amin'ny SOLIDA: Alloys .” Chemistry LibreTexts , tranomboky, 14 Jolay 2020.
1. " Solute Substitutional " Nosoratan'i Substitutional_solute.png: Ny uploader tany am-boalohany dia i Siamrut ao amin'ny Wikipedia Wikipedia. Asa vita: Zerodamage - Ity rakitra ity dia nalaina avy tamin'ny: Solute.png mpisolo toerana: (CC BY-SA 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. " Solute Interstitial " Nosoratan'i Interstitial_solute.png: Siamrut ao amin'ny Wikipedia Wikipedia / * asa derivative: Zerodamage - Ity rakitra ity dia nalaina avy tamin'ny: Interstitial solute.png: (CC BY-SA 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Ethanol sy Bioethanol Fahasamihafana eo amin'ny fingotra voajanahary sy ny volo vita amin'ny vulkanis Fahasamihafana eo amin'ny vy matevina ambany sy ny vy matevina Fahasamihafana eo amin'ny vy tsy manara-penitra Austenitika sy Martensitika Fahasamihafana eo amin'ny Alumina mihetsika sy ny sivana Molecular
Filed Under: Simia indostrialy
Fahasamihafana eo amin'ny ambim-bava sy ny tombom-barotra
Fahasamihafana eo amin'ny GMP sy GLP
Fahasamihafana eo amin'ny endri-javatra sy ny toetra mampiavaka azy
Fahasamihafana eo amin'ny homanona sy ny homophone
Fahasamihafana eo amin'ny Ion tsara sy ratsy